Hreflang oo sharaxay | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Hreflang ayaa sharaxay
Hreflang ayaa sharaxay
Hreflang waa sifo HTML ah oo u ogolaanaysa Google iyo makiinadaha kale ee raadinta inay aqoonsadaan noocyada gudaha ee boggaga internetka. Haddii aad leedahay qaybo ka mid ah goobtaada loogu talagalay dhagaystayaasha Faransiiska, tusaale ahaan, an hreflang tag waxay ka caawisaa Google inuu fahmo in qaybta ay tahay inay ka soo muuqato natiijooyinka raadinta Google.fr, maaha Google.com.
Hreflang maaha mid adag. Qaar ka mid ah milkiilayaasha bogga ayaa ka baqaya inay isticmaalaan, laga yaabee inay sabab u tahay sharaxaadda adag ee Google. Waan jeclahay habka uu saaxiibkii u sharaxo.
Ka fakar dhisme xafiis oo hage-sare oo ku dhex yaal hoolka. Si aad u faa'iido badan u yeelato, hagahani waa inuu yaal dabaq kasta, ma aha oo kaliya qolka lobby-ka, si aad u aragto dabaqa, waxaad mar walba heli kartaa waxa ku yaal dabaqyada kale.
Si la mid ah, si loo fahmo luqadda bogga shabakadda, Google wuxuu u baahan yahay inuu arko buug-tusahaan buuxa iyadoon loo eegin luqadda ay ku degto. Isku mid ah oo dhammaystiran hreflang koodka wuxuu u baahan yahay inuu ku yaal nooc kasta oo bogga ah oo la turjumay.
Halkan waxaa ku yaal tusaale hreflang code.
Marka la soo bandhigo luqadda iyo koodka gobolka, xariiq kasta oo ku yaal bartan ayaa Google u sheegaysa nooca bogga guriga ee ay tahay inuu ku jiro mashiinka raadinta Google.
Tusaale ahaan, xariiqda koowaad waxay Google u sheegaysaa in https://www.website.com ay tahay Google-ka Mareykanka ee loogu talagalay dadka ku hadla Ingiriisiga.
Sadarka labaad ayaa Google u sheegaysa in dadka Ingiriisiga ku hadla ee Kanada ku nool, ay tahay inay tusmeeyaan https://www.website.com/en-ca/.
Sadarka saddexaad ma laha luqad iyo kood gobol. Xaaladdan oo kale, "de" waxay u taagan tahay labadaba baarayaasha ku hadla Jarmalka (Deutsch). Tani waa kiis gaar ah oo lagu xasuusto.
Xariiqda ugu dambeysa waa qaab-qabasho. Waxay faraysaa bots-ka raadinta "haddii kuwa kore midkoodna uusan matalin dhageystayaasha, ka dib u dhig https://www.website.com/." Tani waa kiiska kale ee gaarka ah ee lagu xasuusto.
Hreflang Waa muhiim?
Caqabadaha aan la kulmo hreflang badanaa waa khaladaadka fulinta ee goobaha ecommerce-ka caalamiga ah. Tusaale ahaan khaladku waa halka boggu ku yaal Ingiriis, laakiin koodka ayaa soo jeedinaya inay ku qoran tahay Faransiis. Mararka qaarkood khaladaadka koodaynta lama dareemo ilaa uu wax qabad raadintu qabto. Haddii aad raacdo qaanuunka fudud ee matala gobol kasta iyo luqad kasta waxaad ku samayn kartaa hal lambar oo caalami ah, ma khaldami kartid.
Matoorada wax baadhi kara ayaa go'aamin kara luqadda iyo gobolka la'aanteed hreflang code? John Mueller oo ka tirsan Google ayaa yidhi, "Haddii ay ku qoran tahay luqad kale, sida caadiga ah Google waxa ay ku ogaan kartaa taas la'aanteed hreflang. Inta badan weydiimaha si cad waxay ku qoran yihiin hal luqad, markaa waxaan u diri karnaa isticmaalayaasha nooca bogga."
Si kastaba ha ahaatee, faa'iidooyinka raadinta waxay og yihiin in badan oo ka mid ah in Google uu tabayo waxyaabo muuqda. Waxaan arkay dhibaatooyin tilmaaneed aad u daran sababtoo ah si liidata loo codeeyay ama lama heli karo hreflang sumadaha.
Taladayda? Hantidhawrkaaga hreflang tags si loo hubiyo inaad direyso calaamadaha saxda ah. Google weli iskuma filna.
Dongle-tangling: Isticmaal xoogag fowdo mugdi ah oo waligaa ha lumin adabtarada taleefoonkaaga mar dambe
Sababta & Sida loogu daro Button Ha Iibin WordPress